အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် မေလ 2022 | ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန် ၂ ခုကို အပြည့်အစုံ လေ့လာပါ။
အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် - ၂၀၂၁ တွင်အကောင်းဆုံး Crypto ပိုက်ဆံအိတ်သုံးစောင်
ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုလောကထဲကို ထိုးဆင်းဖို့ ရှာဖွေနေလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ သင်၏တိုကင်များကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းနည်းကို သင်စဉ်းစားရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ cryptocurrency လုပ်ငန်းသည် ဟက်ကာအန္တရာယ်များနှင့် ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ တုန်လှုပ်ဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဟု ထင်ရသော်လည်း အကူအညီသည် လက်ထဲတွင် ရှိနေသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်ရှိ အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်အကြောင်း၊ သင့်ပန်းတိုင်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့်တစ်ခုကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်နှင့် ငါးမိနစ်အတွင်း စတင်သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည့်အဆင့်များအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးပါသည်။
အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် ၂၀၂၁: ထိပ်တန်းသုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုစျေးကွက်တွင်အလွန်အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်များကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ သူတို့ကိုအောက်ပါစာရင်းတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။
Binance: ယေဘုယျအားဖြင့် အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်။
OKEx: ကိရိယာများနှင့် အင်္ဂါရပ်များအတွက် အကောင်းဆုံး Crypto Wallet။
Coinbase: Newbies များအတွက် အကောင်းဆုံး Crypto ပိုက်ဆံအိတ်။
နောက်တစ်ခု၊ မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမှာကူညီဖို့သိုလှောင်မှုရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုငါတို့ကကမ်းလှမ်းတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ငါတို့သည်အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ကိုလည်းထုတ်ပြောထားသည်ကိုသတိပြုပါ အခြားရွေးချယ်စရာ.
အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် ၂၀၂၁: ဘက်စုံသုံးသပ်ချက်များ
မင်းအတွက်ဘယ်သိုလှောင်မှုရွေးချယ်မှုအမျိုးအစားကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတာအပြင်သုံးစွဲနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ပိုက်ဆံအိတ်နောက်ကွယ်ကပံ့ပိုးပေးသူရဲ့ဂုဏ်သတင်းနဲ့အခြားအရာတွေကိုထည့်စဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ဤအရာသည်သင့်အတွက်အသစ်ဖြစ်လျှင်စိတ်မပူပါနဲ့။ အောက်ပါသုံးသပ်ချက်များပြီးနောက်ကောင်းသောတစ်ခုရှာဖွေရန် crypto ပိုက်ဆံအိတ်အမျိုးအစားများနှင့်အဓိကမက်ထရစ်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်။
၁. Binance - ၂၀၂၁ တွင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်
Binance သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသန်းပေါင်းများစွာသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်တစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအကြောင်းများမှာ ၂၀၂၁ ၏အလုံးစုံအကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှသိုလှောင်မှုကို Trust Wallet ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းကိုသင်အခမဲ့ app တစ်ခုအဖြစ် download လုပ်နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် blockchains ၄၀ ကျော်ကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းကို crypto သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ်၎င်းကိုလဲလှယ်ရာတွင်သုံးနိုင်သည်။
Binance ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော Trust Wallet သည် Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano နှင့် Binance Coin ကဲ့သို့နာမည်ကြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ AYE, Cosmos, BurgerSwap, Monetha, Navcoin နှင့်အခြားများစွာအပါအ ၀ င်အရောင်းအဝယ်နည်းသောတိုကင်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည် KYC လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပြီးသည်နှင့် credit (credit platform) ကိုသုံးပြီး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ သင်၏ ID) သင်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအချို့ကိုကိုင်ထားလျှင်၊ လျှောက်လွှာအတွင်းမှကုန်သွယ်ရန်တိုကင် ၁၅၀ ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအရန်သိမ်းရန်နှင့်လုံခြုံရန်ပြန်လည်ရယူထားသောစကားစု (စကားလုံး ၁၂ လုံးပါသောစကားဝှက်တစ်ခု) ကိုဖန်တီးရန်မာစတာကိုယ်ပိုင်သော့ချက်ကို algorithm တစ်ခုဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။
သင်က Binance ဝဘ်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုရွေးချယ်မည့်အစားသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤဥပမာတွင် Binance သည်သင်၏ crypto တိုကင်အများစုကိုမင်းအတွက်အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံမှာလုံခြုံလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အင်တာနက်နှင့်မချိတ်ဆက်ပါ။ ပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်ကငွေထုတ်ခွင့်ပြုမိန့်လိပ်စာကိုလည်းပေးထားပါတယ်။ သင်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ ၀ ယ်ရန်စီစဉ်မည်ဆိုလျှင်သင်၏အစုရှယ်ယာများမလှုပ်မယှက်ပိုင်ဆိုင်မှုများပေါ်တွင်ငွေရှာရန် Binance စုဆောင်းငွေစာရင်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အဓိက Binance ပလက်ဖောင်းတွင် crypto ရောင်းဝယ်သည့်အခါသင်လျှောကြေးတစ်ခုလျှင် ၀.၁၀% ကော်မရှင်ခပေးလိမ့်မည်။ ဒါကိုရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ဒါကဒေါ်လာ ၁၀၀ အော်ဒါတိုင်းအတွက် ၀.၁၀ ဒေါ်လာဘဲ။
အသုံးပြုသူသန်း ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်
လျှောနှုန်း ၀.၁% မှ cryptocurrencies ရာပေါင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးကော်မရှင်
Trust Wallet ကိုအတွေ့အကြုံသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအတွက်ဖန်တီးခဲ့သည်
ပံ့ပိုးထားသော crypto တိုကင်အချို့ကို credit သို့မဟုတ် debit card ဖြင့် ၀ ယ် ယူ၍ မရပါ
Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်အလွန်မှန်းဆရလွယ်ကူပြီးအပြောင်းအလဲမြန်သည်။ ရှေ့မဆက်မီဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကိုအမြဲစဉ်းစားပါ
၂။ OKEx - Tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်များအတွက်အကောင်းဆုံး Crypto ပိုက်ဆံအိတ်
OKEx သည်၎င်း၏စာအုပ်များပေါ်တွင်သန်းပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်များနှင့်အတူအခြားပိုက်ဆံအိတ်ပေးသူဖြစ်သည်။ ပထမရွေးချယ်မှုသည်အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်သော့များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုတာဝန်ခံနိုင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်ဤသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်ရောင်းဝယ်ရန် crypto အတွဲ ၄၀၀ ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ခရီးဆောင်လဲလှယ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော ဦး ထုပ်များတွင် Bitcoin၊ Cardano၊ Polkadot နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အကွာအဝေးကြောင့်အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ BabyDoge, Smooth Love Potion, ECOMI, Clover Finance, Yield Guild Games နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သောတိုကင်များကိုမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ KYC လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးပြီးနောက် credit နှင့် debit ကတ်များ သုံး၍ app မှတဆင့်ငွေသွင်းနိုင်သည်။ ၀ ယ်ရောင်းရောင်း ၀ င်ကြေးမှာ ၀.၁၀%ဖြစ်သည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ OKEx web wallet ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သော့များ၏လုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ လုံခြုံရေးသည် SHA -256 hash နှင့် ECDSA encryption ပုံစံတို့ကဲ့သို့ backup များ၊ ဘဏ်သိုလှောင်ရုံများနှင့်သိုလှောင်မှုအကန့်အသတ်များဖြင့်လာသည်။ cryptocurrencies အချို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီလား။ သင်ဤအရာကိုအခြားထောက်ပံ့ထားသောတိုကင်များနှင့်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည်အခြားရှိပြီးသားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို ၀ ယ်ရန်သင်၏လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည်။
cryptocurrency အတွဲ ၄၀၀ ကျော်ထောက်ခံခဲ့သည်
၀.၁% မှ cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်ကော်မရှင်
3. Coinbase - Newbies များအတွက်အကောင်းဆုံး Crypto ပိုက်ဆံအိတ်
Coinbase သည်အသစ်များအတွက်အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကိုပေးသောနာမည်ကြီးလဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အကောင့်ပေါင်း ၅၆ သန်းကျော်ကိုကြည့်ရှုပြီးမိုဘိုင်းသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်နှင့်ကုန်သွယ်မှုအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် iPhone နှင့် Android အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့ download လုပ်ပြီး DAI နှင့် USDC အပါအ ၀ င်စျေးကွက်တွင် ERC -56 တိုကင်အားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ Bitcoin, Stellar, Litecoin, Dogecoin နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ပိုင်ဆိုင်မှု ၅၀၀ ကျော်ကိုလည်းသိုလှောင်။ လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
သင်၏ Coinbase အကောင့်ကို ပိုက်ဆံအိတ်သို့ ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် ပံ့ပိုးပေးထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို မိုဘိုင်းအက်ပ်မှ တိုက်ရိုက် လွှဲပြောင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် သင့်အား ဝဘ်ရွေးချယ်ခွင့်ကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်စေသည်၊ ယင်းအခြေအနေတွင် သင့်တိုကင်များ၏ 98% ကို အော့ဖ်လိုင်းတွင် လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားသည်။ ပလက်ဖောင်းသည် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသော့များကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးသောကြောင့် စတင်သူများ အထူးသဖြင့် ဤလမ်းကြောင်းကို ပိုနှစ်သက်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူဖို့ မလိုပါဘူး။
ဤ crypto ပိုက်ဆံအိတ်သည်အထက်ဖော်ပြပါ 2FA နှင့် Coinbase (သို့) ပြင်ပလိပ်စာများသို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောငွေထုတ်ခြင်းကိုသာပေးနိုင်သောအထက်ဖော်ပြပါ 1.49FA နှင့်သုံးခွင့်ပြု whitelisting feature တစ်ခုကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါဤနေရာမှကော်မရှင်ခများသည်တစ်ပြားလျှင် ၁.၄၉% တွင်စျေးအနည်းငယ်ရှိသည်။ ထို့ပြင်သင်၏အကောင့်ကို credit (သို့) debit card ဖြင့်ရန်ပုံငွေပေးရန်ရွေးချယ်လျှင်၎င်းသည် ၃.၉၉ ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမည်။ ဤပံ့ပိုးသူသည် KYC လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအတိအကျလိုက်နာသည်။
အဖွဲ့အစည်းအဆင့်လုံခြုံရေးနှင့်ရွေးချယ်ရန် cryptocurrencies များစွာ
ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော crypto လဲလှယ်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်များအားဝန်ဆောင်မှုပေးသည်
ဒက်ဘစ်ကတ်များတွင်ငွေသွင်းကြေး ၃.၉၉% ပါ ၀ င်သည်။
Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ဆိုတာဘာလဲ။ အမြန်ချုပ
မင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်မင်းအကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသုတေသနလုပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကအတိအကျဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သည်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုသင်၏သိုလှောင်ရန်သာအသုံးပြုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေး။
သင်ရွေးချယ်သောပိုက်ဆံအိတ်ပေါ် မူတည်၍ အများသုံးလိပ်စာတစ်ခုကိုရရှိလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်အမျိုးအစားကုဒ်နှင့်အကောင့်နံပါတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူများအားတိကျသောလိပ်စာတစ်ခု သုံး၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုကင်များပေးပို့ရန်သင်လုပ်နိုင်သည်။
ပိုက်ဆံအိတ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး သီးသန့်သော့ကိုလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည့် သင်တစ်ဦးတည်းသာ သိသင့်သော လျှို့ဝှက်ကုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များသည်လဲလှယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်နှစ်ဆတိုးနိုင်ပြီးသင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကိုလုံခြုံစွာသိုလှောင်နိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူ ၀ ယ်နိုင်၊ ရောင်းနိုင်၊ လဲနိုင်သည်။
သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး Crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကိုရွေးချယ်ရန်လမ်းညွှန်
အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုလမ်းညွှန်အတွက်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်နိုင်သောအကူအညီများအပြင်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များနှင့်အခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
သင်မည်သည့် Crypto ပိုက်ဆံအိတ်အမျိုးအစားလိုအပ်သနည်း။
စတင်ရန်၊ မည်သည့်အရာကို စဉ်းစားရမည်နည်း။ ပုံစံ crypto ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှမင်းနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အဓိကရွေးချယ်စရာလေးမျိုးရှိပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုလက်လှမ်းမီမှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ယူမှုနှင့်လုံခြုံရေးအဆင့်များကွဲပြားသည်။
Hardware Device များ
ဟာ့ဒ်ဝဲစက်ပစ္စည်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် မီဒီယာဖိုင်များကို သိမ်းဆည်းရန် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့် USD flash drive နှင့်တူသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်သော့ကို အိမ်ဆောက်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း သင်၏ cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ဤလျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို လိုအပ်ပါသည်။
အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးအတွက် hardware ပိုက်ဆံအိတ်များစွာသည်ပုံမှန်အပ်ဒိတ်များလိုအပ်သည်။
ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများတွင် မကြာခဏ ဒေတာအရန်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
အချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက၎င်းကိုသီးခြားကိရိယာတစ်ခုသို့ထည့်။ ရာသီဥတုကိုကြံ့ခိုင်ရန်သတ္တုအထူဖြင့်ထွင်းထုပါ၊ သို့မဟုတ်အပိုင်းများ ခွဲ၍ နေရာများစွာ၌သိုလှောင်ပါ။
အထူးသဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် hardware wallet ကို laptop ကဲ့သို့ device တစ်ခုတွင်အများအားဖြင့်တပ်ရန်လိုသည်။ ထို့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀ မှ ၁၅၀၀ အထိဘယ်နေရာမှမဆိုကောက်ခံနိုင်သည်။
ဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်စိတ်အေးချမ်းမှုအတွက်အကောင်းဆုံး crypto သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်သည် CFDs မှတဆင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောအရစ်ကျနှင့်လက်မှတ်ထိုးရန်ဖြစ်သည်။ အခြေခံသင်္ကေတများမရှိသောကြောင့်သင်၏ရန်ပုံငွေများလုံခြုံမှုကိုသင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
ထို့အပြင်၊ သင်အလိုရှိသည့်အချိန်တိုင်း ချက်ချင်းငွေထုတ်နိုင်ပြီး ပမာဏကို အများအားဖြင့် ကမ်းလှမ်းပါသည်။ ဒီနည်းလေးအကြောင်းပြောပါမယ်။ crypto ပိုက်ဆံအိတ် နောက်ပိုင်းတွင် ဖြေရှင်းချက်နှင့် အလုပ်အတွက် အကောင်းဆုံး ပလပ်ဖောင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါဟာ့ဒ်ဝဲလမ်းကြောင်းများနှင့်မတူဘဲ၊ web ပိုက်ဆံအိတ်များသည်လုံခြုံမှုနည်းပါးသည်၊ အထူးသဖြင့်စည်းမျဉ်းမရှိသောပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သော့များကိုသင်မကြာခဏသုံးစွဲနိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက crypto လဲလှယ်မှုသည်တကယ့်အန္တရာယ်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင်၏ရန်ပုံငွေများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခိုးယူရန်အလွန်အားနည်းစေသည်။
စည်းမျဉ်းတစ်ခု ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း ဤအမျိုးအစားတွင်အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ကိုမကြာခဏကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်၊ ရောင်းရန်နှင့်ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်၊ သင်သည်သင်၏အစုရှယ်ယာများကိုရယူရန်သင်၏ brokerage account သို့ ၀ င်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါအားသာချက်များအပြင်ထိန်းချုပ်ထားသောပွဲစားများသည်ကွဲပြားသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချမှုများအကြားတိုကင်များလွှဲပြောင်းခြင်းမှသင့်ကိုကယ်တင်သည်။ ထို့ပြင်သူတို့သည်မကြာခဏ fiat အပ်ငွေများကိုမြန်ဆန်စွာအဆင်ပြေစေပြီးအခကြေးငွေများကိုသက်သာစေသည်။
အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်သည်သင်၏လက်ဖဝါး၌အဆုံးမှအဆုံးကုန်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းသည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသိုလှောင်ရန်အသုံးနိုင်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းအမျိုးအစားသည်အများအားဖြင့် Android နှင့် iPhone အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သင်ထည့်သွင်းရမည့်လိပ်စာစာရင်းကိုလည်းရှာနိုင်သည် - စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်များသို့သာပို့ဆောင်နိုင်သည်ကိုအာမခံသည်။
desktop ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးသည်သင်၏ laptop (သို့) အိမ်သုံးကွန်ပျူတာသို့ software ကို download လုပ်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ သင်သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရယူလိုလျှင်ဤပြဿနာကိုပြသနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်၏တိုကင်များကိုင်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းနှင့်မနီးစပ်ပါ။
အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်သည်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုသင်ချက်ချင်းရောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖြစ်သည်။ သင်၏အစုစု၏တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးသည့်အခါရွေးချယ်စရာတစ်ခုထက်ပိုရှိခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုအကျိုးရှိလိမ့်မည်။
အထက်ဖော်ပြပါသိုလှောင်မှုအမျိုးအစားများအတွက်အခြားတစ်ခုအတွက် AvaTrade ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုနောက်ပိုင်းတွင်စစ်ဆေးပါ။ ပိုက်ဆံအိတ်နောက်ကွယ်မှပွဲစားသည် app တစ်ခုနှင့်၎င်း၏အဓိကပလက်ဖောင်းမှတဆင့် crypto CFDs များကိုလည်းရယူနိုင်သည်။
များစွာသော cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များ (နှင့်၎င်းတို့၏ပံ့ပိုးပေးသူများ) သည်စည်းကမ်းမရှိကြပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောအခါမည်သည့်စံနှုန်းများကိုမျှလိုက်နာရန်မလိုပါ။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်လိုင်စင်ရသိုလှောင်သူများသည်လိမ်လည်မှုကဲ့သို့အွန်လိုင်းရာဇ ၀ တ်မှုများမှသင်၏ဘဏ္ancesာရေးကိုလုံခြုံရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများကိုလိုက်နာသည်။
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ပုဂ္ဂလိကသော့များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုလုံခြုံစိတ်ချရခြင်း၏တာဝန်ကိုယူခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည် - ကိစ္စအများစုတွင်ပွဲစားကမင်းအတွက်လုပ်လိမ့်မယ်။
ဤနေရာရှိ လိုင်စင်များကို ပေးဆောင်သည့် အကြီးမားဆုံး စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးအချို့ ပါဝင်သည်။ ASIC, အ FCAနှင့် CySEC.
မင်းရဲ့ Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်လုပ်မလဲ။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ စည်းမျဉ်းကမင်းကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအရောင်းအဝယ်လုပ်နေပြီးမင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလုံခြုံစိတ်ချရတယ်။ ဒီ့အပြင်၊ မင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကဘာလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်တွေရှိနေလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
2FA /အချက်နှစ်ချက်အားအတည်ပြုခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း 2FA သည်အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်များတွင်သုံးသောအခြေခံလုံခြုံရေးအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအတွက်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အဖြစ်များဆုံးတစ်ခုမှာစက္ကန့် ၃၀ အတွင်းသက်တမ်းကုန်မည့်ယာယီနှင့်ထူးခြားသောကုဒ်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို One-time Password (TOTP) ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းကိုအခြားစကားဝှက်တစ်ခုနှင့် တွဲ၍ လုံခြုံရေးအပိုတစ်ခုထပ်ထည့်လိမ့်မည်။
ကိရိယာနှင့် IP Whitelisting: ကျွန်ုပ်တို့ထိမိသည့်အတိုင်း၎င်းမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်သင်၏အတည်ပြုထားသောနေရာများသို့လိပ်စာများထည့်သွင်းသည်။ ၎င်းသည်မည်သူမဆိုသင်၏အထောက်အထားများကိုကိုင်။ စိတ်မချရသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုသို့ငွေပို့ခြင်းကိုတားဆီးသည့်ကာကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဲဒါကလုံခြုံရေးအရပါ။ မင်းအတွက်ဘယ် crypto သိုလှောင်မှုအဖြေကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်ခင်ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အရာတွေရှိတယ်၊ ငါတို့နောက်မှာရှင်းပြမယ်။
မင်းရဲ့အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ကိုမင်းရှာဖွေရာမှာမင်းမှာတိကျတဲ့စျေးကွက်တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေရွေးချယ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကိုရယူခွင့်ရှိခြင်းသည်အားသာချက်တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သည်ကွဲပြားသောတိုကင်များစုပုံခြင်းကိုပံ့ပိုးပေးသောသိုလှောင်မှုအဖြေတစ်ခုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် Litecoin ကို ၀ ယ်ပါ ယခုသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ရန်ပုံငွေအချို့ခွဲဝေပေးချင်သည် Shiba Inu Coin ဝယ်ပါ or Tron.
သင်ပြောင်းနိုင်၊ ဝယ်နိုင်၊ ရောင်းနိုင်ပါသလား။
သင်သဘောပေါက်နိုင်သည့်အတိုင်းသိုလှောင်မှုရွေးချယ်မှုနှစ်ခုမှာတူညီခြင်းမရှိပါ။ အချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကပိုက်ဆံအိတ်ကို download လုပ်ပြီးအဲဒါကိုသက်သက်သာသာသုံးပြီးပျော်နေကြတယ် စတိုးဆိုင် သူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အစမှအဆုံးကုန်သွယ်မှုဖြေရှင်းချက်ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ၎င်းတွင်အများအားဖြင့် ၀ ယ်နိုင်၊ ရောင်းနိုင်၊ ပြောင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်လည်းပါ ၀ င်သည်။
မင်းမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းမင်းတိုကင်တွေလုံခြုံဖို့အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါစဉ်းစားဖို့ရှုထောင့်မျိုးစုံရှိတယ်။ သင်လုံခြုံရန်အားထုတ်မှုနည်းသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်နှင့်၎င်းကိုသင်အပြောင်းအရွေ့တွင် ၀ ယ်ရောင်းနှင့်ရောင်းခွင့်ပြုသည် - ဆက်ဖတ်ပါ။
အောက်တွင် crypto ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးနည်းကိုပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဒီပံ့ပိုးသူကမင်းကိုတိုက်ရိုက် cryptocurrencies ၀ ယ်ဖို့ခွင့်မပြုပေမယ့်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်တယ် အကောင်းဆုံး CFD ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ အာကာသ၌တည်၏။
၁။ AvaTrade-ဘက်စုံအကောင်းဆုံး Crypto ပိုက်ဆံအိတ်ရွေးချယ်မှု
အဆင့် 1 နှင့် အဆင့်2တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြားသည် ASIC (Australia) နှင့် MiFID (အီးယူ) အပါအဝင် AvaTrade ကို ထိန်းချုပ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေသည်။ CFD ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူရန် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို မယူနိုင်သောကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအိတ်တစ်လုံးအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးပါသည်။ တိုက်ရိုက်မရ။ အဲဒီအစား CFD တွေကအရင်းခံတိုကင်တွေရဲ့စျေးနှုန်းကိုခြေရာခံပြီးဘာကိုမှသိုလှောင်ရန်သို့မဟုတ်လုံခြုံရန်မလိုအပ်ပါ။
လူများစွာသည်၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်သော့များအားကြည့်ရှုရန်နှင့်အပိုလုံခြုံရေးအစီအမံများလိုအပ်ချက်ကိုဖြတ်တောက်သောကြောင့်၎င်းကိုအကျိုးရှိသည်။ Cryptocurrency CFD များသည်လည်းသင့်အားမြင့်တက်လာရန်ချင့်ချိန်နိုင်သည် or သင်ရွေးချယ်ထားသောတိုကင်များကျဆင်းခြင်းဥပမာအားဖြင့်၊ သင် Polkadot သည်စျေးကျဆင်းသည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်၊ ကျဆင်းနေသောစျေးမှအမြတ်ရရန်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါကိုမသိတဲ့ဘယ်သူမဆိုအတွက်တိုတောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။
သင်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းပိုက်ဆံအိတ်၏အသံကိုကြိုက်။ သွားလာရင်းရောင်းဝယ်ချင်လျှင် AvaTradeGO ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ဒီအခမဲ့အပလီကေးရှင်းကမင်းရဲ့အကောင့်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့၊ CFD တွေအဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေကို ၀ ယ်ရောင်းလုပ်နိုင်စွမ်းအပြင်၊ ပွဲစား၏ခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရပ်တည်မှုသည်တိုကင်များကိုသိုလှောင်ရန်နှင့်လုံခြုံရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေးသည်။ စာရင်းပြုစုထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် Bitcoin, MIOTA, Ripple, Stellar, NEO, Dogecoin နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ကော်မရှင်မပေးဘဲဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးမျိုးစုံကို CFDs များမှတဆင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီးစျေးကွက်အားလုံးတွင်ပျံ့နှံ့မှုကတင်းကျပ်သည်။ သင်၏အကောင့်ထဲသို့ရန်ပုံငွေများထည့်ရန် Neteller၊ WebMoney နှင့် Neteller အပါအ ၀ င်အကြွေးနှင့်ဒက်ဘစ်ကတ်များ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲများနှင့် e-wallets များအကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မင်းကမင်းရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုငွေပြန်ထုတ်ချင်တဲ့အခါအော်ဒါတစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်မင်းရဲ့အကောင့်ထဲကို ၀ င်တာရိုးရှင်းပါတယ်။
သိုလှောင်မှုနှင့်တိုကင်များလုံခြုံမှုအတွက်စိတ်မပူဘဲ crypto CFDs များကိုရောင်းဝယ်ပါ
ပိုက်ဆံအိတ်ပေးသူကို tier-1 နှင့် tier-2 jurisdictions များဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်
အပြိုင်အဆိုင်ပြန့်နှံ့မှုများနှင့်အတူအခမဲ့ crypto ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်
အရောင်းအ ၀ ယ်မရှိသည့်တစ်နှစ်အကြာတွင်စီမံခန့်ခွဲသူနှင့်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်အကောင်းဆုံး Crypto ပိုက်ဆံအိတ် - အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်စတင်ပါ
မင်းအတွက်အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ကိုမင်းဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်၊ ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတာကိုအောက်ခြေမှာတွေ့လိမ့်မယ်။
အဆင့် ၁: Crypto Wallet Provider နှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကပံ့ပိုးပေးသူနဲ့လက်မှတ်ထိုးပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ယနေ့ crypto ပိုက်ဆံအိတ်များအားယုံကြည်ရသောပွဲစားများသို့မဟုတ်လဲလှယ်မှုများမှကမ်းလှမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်မင်းရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံ၊ အီးမေးလ်နဲ့ရွေးထားတဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ထို့နောက်၊ သင် crypto ပိုက်ဆံအိတ်ပေးသူအားသင်၏နေထိုင်မှုလိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ငွေကြေးရပ်တည်မှုနှင့်ပတ်သတ်သောအခြားအချက်အလက်အချို့ကိုလည်းပြောပြရန်အလားအလာရှိသည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေက AML စည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာလိမ့်မယ်။
ဆိုလိုသည်မှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားများသည်သင်၏ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ငွေကြေးရာဇ ၀ တ်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အတည်ပြုရမည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင့်အထောက်အထားအတွက် သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူနှင့် သင့်လိပ်စာကိုသက်သေပြရန် မကြာသေးမီက အသုံးဝင်သောငွေတောင်းခံလွှာ သို့မဟုတ် ဘဏ်ရှင်းတမ်းတစ်စောင်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။
အဆင့် ၂: သင်၏ရွေးချယ်မှု၏ Crypto ပိုက်ဆံအိတ်ဖြင့်စတင်ပါ
မိုဘိုင်းအက်ပ်ကို သင်ရွေးချယ်ပါက သက်ဆိုင်ရာစတိုးမှ ၎င်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Android အတွက် Google Play နှင့် iPhone အသုံးပြုသူများအတွက် App Store ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းလ်ပိုက်ဆံအိတ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသင် install လုပ်ပြီးသည်နှင့်သင်အဆင့် ၁ တွင်သင်ဖန်တီးခဲ့သည့်အသေးစိတ်များဖြင့် ၀ င်နိုင်သည်။
ဝဘ်ပိုက်ဆံအိတ်လမ်းကြောင်းကို သင်နှစ်သက်ပါက - သင်၏အစုစုတွင် cryptocurrencies ပေါင်းထည့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် အစား ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် အကောင့်ဝင်ပါ။
အဆင့် ၃ - သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ Cryptocurrencies အချို့ကိုထည့်ပါ
သင်သည်မည်သည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများမ ၀ ယ်ရသေးပါကသင်ရွေးချယ်ထားသောငွေပေးချေမှုပုံစံကို သုံး၍ ငွေသွင်းနိုင်ပြီးပိုက်ဆံအိတ်မှတဆင့်တိုကင်များ ၀ ယ်နိုင်သည်။
မင်းမှာ cryptocurrencies အချို့ပိုင်ဆိုင်နေပြီဆိုရင်ပိုက်ဆံအိတ်ပေးသူကမင်းရဲ့သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အသစ်ဆီကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေပို့ဖို့ပိုက်ဆံအိတ်ပေးသူကမင်းရဲ့ public address ကိုသုံးပါ။
သင်တို့သည်လည်း AvaTrade ကဲ့သို့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောအရစ်ကျကိုသုံးနိုင်သည့်အခြေအနေ၌ CFD မှတဆင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဤတွင်၊ သင်သည် ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်များ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲမှုများ သို့မဟုတ် e-wallets များကို အသုံးပြု၍ သင့်အကောင့်ထဲသို့ ရန်ပုံငွေထည့်နိုင်သည်။ ထို့နောက်၊ သိုလှောင်မှုအကျပ်အတည်းကိုလုံးဝရှောင်ရှားရန် CFDs မှတဆင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ပါ။
သင်မည်သည့် digital တိုကင်များကိုသင်ရယူလိုသည်ကိုသိပါက search bar function ကို သုံး၍ ရွေးပါ။ သင် ၀ ယ်လိုသောပမာဏ (သို့မဟုတ် CFD အတိုကောက်ကိစ္စတွင်ရောင်းရန်) ထည့်သွင်းပြီးအရာအားလုံးကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး Cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ် ၂၀၂၁: အပြည့်အ ၀ နိဂုံး
ဤလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်တွင်ရရှိနိုင်သောအမျိုးမျိုးသော crypto ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်အသုံးပြုပုံ၊ လုံခြုံရေးနှင့်အင်္ဂါရပ်များအရ၎င်းတို့မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုငါတို့ပြောခဲ့သည်။ Hardware ပိုက်ဆံအိတ်များသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုနားလည်သောနှစ်ချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများသည်အဆင်ပြေသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်၏အန္တရာယ်များကိုဖြစ်စေနိုင်သောသင်၏ကိုယ်ပိုင်သော့များအားဂရုပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒီအချက်အလက်တွေဆုံးရှုံးရင်မင်းတိုကင်တွေကိုသုံးခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏ပိုက်ဆံများမည်မျှအားနည်းချက်ကြောင့် ၀ က်ပိုက်ဆံအိတ်သည်အမြဲအလုံခြုံဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ အများစုအတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းသည်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အာကာသအတွင်း အကောင်းဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ် အခြားရွေးချယ်စရာ AvaTrade ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ ASIC နှင့် အခြားဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များ6သည် ဤပွဲစားအား ထိန်းညှိပေးသည် - လုံခြုံသော CFD ကုန်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးသည်။ ထို့အပြင်၊ CFD များမှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ဝယ်ယူခြင်းသည် တိုကင်များသိမ်းဆည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနှင့် ဖိအားများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် မည်သည့်ကော်မရှင်အခကြေးငွေကိုမျှ ပေးဆောင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် ကျဆင်းနေသော စျေးကွက်များမှလည်း အကျိုးအမြတ်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ကဘာလဲ။
အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သည် Binance ဖြစ်သည်။ ပထမရွေးချယ်မှုသည်လဲလှယ်မှုမှကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော Trust Wallet ဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသည်မတူညီသော blockchains ၄၀ ကျော်ကိုပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်ဒီဂျစ်တယ်တိုကင် ၁၅၀ ကျော်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အခမဲ့မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သော့များကိုကြည့်ရှုလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့သော့တွေကိုဂရုစိုက်တာနဲ့မင်းရဲ့ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုအများစုကိုအအေးခန်းထဲမှာလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ web wallet solution ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ရွေးချယ်မှုကဘာလဲ။
အကောင်းဆုံး cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်ရွေးချယ်မှုသည်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစား AvaTrade ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေကို CFDs တွေကတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်တယ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေကိုလုံခြုံအောင်သိုလှောင်ထားမှာကိုစိုးရိမ်တာကိုလျှော့ချပေးတယ်။ ထို့ပြင်၊ သင်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြင့်တိုတောင်းစွာဖြင့်ကျဆင်းနေသောစျေးကွက်များမှအမြတ်ရရန်ကြိုးစားနိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကုန်သွယ်မှု ၀% ကော်မရှင်ကိုပေးသည်၊ ပလက်ဖောင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းသည်အကြွေးနှင့် debit ကတ်များ၊ e-ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းအပါအ ၀ င်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာကိုလွယ်ကူစွာထောက်ကူပေးသည်။ အဓိကအားသာချက်မှာ၎င်း၏ခိုင်မာသောစည်းမျဉ်းရပ်တည်မှုကြောင့်လုံခြုံသောကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ကိုယ်ပိုင် ATM ပင်နံပါတ်များကို အသုံးပြုသည့် ဘဏ်စာရင်းများတွင် မြင်သာထင်သာရှိသော ငွေသားကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ crypto ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ သင့်အား အများသူငှာသော့တစ်ခု (လူများထံသို့ တိုကင်များပေးပို့နိုင်သောလိပ်စာတစ်ခု) နှင့် သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်စေရန်အတွက် သီးသန့်သော့တစ်ခုကို သင့်အား ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ AvaTrade ကဲ့သို့ ထိန်းညှိပွဲစားတစ်ခုဖြင့် စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပြန်လည်ရယူရေးစကားစုနှင့် လျှို့ဝှက်သော့များကို ဟက်ကာများထံမှ လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားရန် မလိုအပ်ဘဲ cryptocurrencies ၏အရင်းခံတန်ဖိုးကို ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုရန်အလုံခြုံဆုံး crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကဘာလဲ။
အကယ်၍ သင်သည် အတွေ့အကြုံရှိပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်နည်းကို နားလည်ပါက၊ ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ Newbies များသည် ထိန်းညှိထားသော ပလပ်ဖောင်းများမှသာလျှင် လုံခြုံစိတ်ချရသော ကုန်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးဆောင်သည့် AvaTrade ကဲ့သို့သော ပွဲစားများနှင့် တွယ်ကပ်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် အရင်းခံပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးအပေါ်အခြေခံ၍ ရောင်းဝယ်ခြင်းမျှသာဖြစ်သောကြောင့် ဤနေရာတွင် သိုလှောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်ကိုယ်သင် ပူပန်နေရန်မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် crypto ပိုက်ဆံအိတ်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရောင်း ၀ ယ်နိုင်၊ ပြောင်းနိုင်သလား။
crypto ပိုက်ဆံအိတ်သည်သင် ၀ ယ်နိုင်၊ ရောင်းနိုင်၊ ပြောင်းနိုင်၊ စတိုးဆိုင်နှင့်သင်ရွေးချယ်သောအမျိုးအစားနှင့်နောက်ကွယ်မှပံ့ပိုးသူပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤဘက်စုံကုန်သွယ်မှုဖြေရှင်းချက်သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်လျှင်၊ သင်အသုံးပြုနေသော crypto CFDs များစွာကိုသင်ရယူနိုင်သော AvaTradeGO app ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။